ယူနိုက်တက်အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကစားရန် ကော်တင်ဟိုဆန္ဒရှိနေ။ – SoShwe
Home/Sport/ယူနိုက်တက်အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကစားရန် ကော်တင်ဟိုဆန္ဒရှိနေ။
ယူနိုက်တက်အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကစားရန် ကော်တင်ဟိုဆန္ဒရှိနေ။
admin March 12, 2019	Sport Leaveacomment
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကော်တင်ဟိုသည် လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့၌ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ယူနိုက်တက်အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကစားရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကော်တင်ဟိုသည် ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က ဗယ်လက်ကာနိုအသင်းကို ၃-၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် လာလီဂါပွဲစဉ်တွင် ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပေမယ့် ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ရန် ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ပွဲကစားချိန် မိနစ် (၈၀) ၌ ကွင်းလယ်ကစားသမား ရာကီတစ်နဲ့ လူစားလဲခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အသက် (၂၆) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ကော်တင်ဟိုသည် ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၈) ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ လီဗာပူးအသင်းမှ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး လက်ရှိ (၂၀၁၈-၁၉) ခုနှစ် ဘောလုံးရာသီ၌ အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံသွင်းဂိုး (၈) ဂိုးသွင်းပြီး (၅) ကြိမ် ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်၌မူ အဆိုပါ ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားသမားရဲ့ စပိန်မြေအနာဂတ်ဟာ ရေရှည်အာမခံချက်မရှိတော့ဘဲ ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း လာမည့်အပြောင်းအရွှေ့ရာသီ၌ ကော်တင်ဟိုကို ရောင်းချသွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။
The Mirror သတင်းစာရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ကော်တင်ဟိုသည် ယူနိုက်တက်ကစားသမားအချို့နဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပြီး လာမည့် (၂၀၁၉-၂၀) ခုနှစ် ဘောလုံးရာသီ၌ ယူနိုက်တက်အသင်းထံ လာရောက်ကစားရန် မေးမြန်းမှုများရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အခြားသော သတင်းများရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ကော်တင်ဟိုသည် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များကို လွမ်းဆွတ်နေပြီဖြစ်ပြီး အသင်းဟောင်း လီဗာပူးအသင်းရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် ယူနိုက်တက်အသင်းထံ လာရောက်ကစားရန်အတွက်လည်း စိတ်အားထက်သန်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ကော်တင်ဟိုသည် လီဗာပူးအသင်းအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲပေါင်း (၁၅၂) ပွဲပေါင်း ကစားပေးခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး (၄၁) ဂိုး၊ (၃၇) ကြိမ် ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Previous ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းသို့ မော်ရင်ဟို ပြန်လာမည့် အစီအစဉ်အား ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် ကစားသမားများ။
Next ????????????? ?????????????? ???????? ?????????????? ????????????? ????????????????? ?????????????